Ny fahendren'Andriamanitra - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > fohy fisainana > Ny fahendren'Andriamanitra
Misy andininy iray mivaingana ao amin'ny Testamenta Vaovao izay anirian'ny apostoly Paoly milaza ny hazo fijalian’i Kristy ho fahadalana amin’ny Grika sy fahatafintohinana amin’ny Jiosy (1. Korintiana 1,23) , Mora ny mahazo ny antony anaovany io fanambarana io. Rehefa dinihina tokoa, hoy ny Grika, ny fitsipi-pitenenana sy ny filozofia dia ny fanenjehana ambony. Ahoana no ahafahan'ny olona nohomboana iray nampita fahalalana?
Dia feo rehetra izany ary faniriana ny ho afaka amin'ny saina jiosy. Nandritra ny tantaran'izy ireo dia notafihan'ny hery marobe izy ireo ary matetika fanalam-baraka nataon'ireo tompon-kery. Na Asyrianina, babylonianina na Romana dia voaroba imbetsaka i Jerosalema ary lasa tsy manan-kialofana ny mponina ao. Inona no fanirian'ny Hebreo iray mihoatra noho ny olona izay miahy ny adiny ary mandroaka ny fahavalo? Ahoana no ahafahan'ny Mesia iray nohomboana tamin'ny hazo fijaliana?
Ho an'ny Grika, ny hazo fijaliana dia fahadalana. Ho an’ny Jiosy, dia fanelingelenana sy vato mahatafintohina izany. Raha ny amin’ny hazo fijalian’i Kristy, inona no tena nanohitra mafy izay rehetra nanana fahefana? Mahamenatra sy mahamenatra ny fanomboana. Tena nanala baraka tokoa ny Romanina, izay manam-pahaizana manokana momba ny fampijaliana, ka nanome antoka ny olom-pireneny fa tsy hohomboana na oviana na oviana ny Romana iray. Tsy vitan’ny hoe nanala baraka ihany anefa izany, fa nampahory koa. Eny tokoa, ny teny anglisy excruciating (agonizing) dia avy amin'ny teny latinina roa: "ex cruciatus" na "avy amin'ny hazo fijaliana". Ny fanomboana no teny enti-milaza ny fahoriana.
Tsy manakana antsika ve izany? Tsarovy - fanalam-baraka sy fangirifiriana.Izany no fomba nofidian'i Jesoa hanolo-tanana antsika hamonjy ny famonjena azy. Hitanareo, ilay antsointsika hoe ota, fa ny zavatra tsy manavakavaka antsika dia manimba ny fahamendrehana izay nahary antsika. Mitondra fanalam-baraka amin'ny maha-izy antsika sy ny fanaintainana amin'ny fisiantsika. Mampisaraka antsika amin'Andriamanitra.
Ny zoma zoma lasa roa arivo taona lasa izay dia nanetry tena sy fanaintainana lehibe i Jesosy mba hamerenantsika ny fahamendrehan'ny fifandraisana amin'Andriamanitra sy ny fanasitranana ny fanahintsika. Ho tsaroanao ve fa natao ho anao io ary hanaiky ny fanomezana ve ianao?
Dia ho hitanao avy eo fa ota izany, fahadalana. Ny fahalemena lehibe indrindra dia tsy fahavalo avy any ivelany, fa ny fahavalo avy ao anaty. Ny sitrapontsika ihany no mahatonga antsika ho tafintohina. Jesosy Kristy kosa manafaka antsika amin'ny hadalan'ny ota sy ny fahalemen'ny tenantsika.
Izany no tena antony nahatonga ny apostoly hitory an'i Jesosy Kristy ho ilay voahombo tamin'ny hazo fijaliana, izay herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Mankanesa amin'ny hazo fijaliana ary fantaro ny heriny sy ny fahendreny.